Chelsea Oo Lagu Dhegay, Tuchel Oo Aan Weli Laga Badinin & Minamino Oo Caawiyay Kooxdiisa Liverpool | Laacibnet.net
Chelsea Oo Lagu Dhegay, Tuchel Oo Aan Weli Laga Badinin & Minamino Oo Caawiyay Kooxdiisa Liverpool
Chelsea ayaa barbarp niyadjab ah kala kulantay kooxda Southampton iyadoo tababare Thomas Tuchel aan weli laga badinin horyaalka Premier League iyadoo Blues ay barbaro 1-1 kala soo laabatay garoonka St Mary’s Stadium.
Weeraryahanka Minamino ayaa caawiyay kooxdiisa Liverpool isagoo hogaanka u dhiibay Southampton ka inta uusan Mason Mount rigoore ku barbareynin ciyaarta, waxayna Chelsea oo kaalinta 4aad ku jirta ay haatan seddex dhibcood ka sareysaa kooxda kaalinta lixaad ee Liverpool oo caawa la ciyaareysa Everton.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay iyadoo Chelsea ay heysatay kubada inteeda badan islamarkaana u diiday Southampton inay xitaa soo gaaraan xeradooda goolka.
Laakiin Chelsea ayaa ku guuldareystay qeybtii hore inay tijaabiso goolhayaha Southampton, waxayna taasi bedelkeeda keentay in Southampton ay hogaanka ciyaarta qabato daqiiqadii 33aad inkastoo kubada laga heystay.
Ward-Prowse iyo Redmond ayaa baasas isku weydaarsaday bartamaha garoonka ka hor inta uu Redmond kubad dhex bixis cajiib ah u dhigin Minamino. Xiddiga amaahda uga soo maqan Liverpool ayaa dhulka seexiyay goolhaye Mendy iyo daafaca Azpilicueta ka hor inta uusan si degan shabaqa oo faaruq ah u tooganin.
Waxay aheyd markii ugu horeysay oo Chelsea oo hogaanka laga qabto tan iyo markii uu tababare u noqday Thomas Tuchel, iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay gool iyo waxba oo ay Southampton hogaanka ku heysay.
Daqiiqadii 53aad ee qeybtii labaad ayaa Chelsea rigoore loo dhigay markii uu Ings qalad kula galay xerada ganaaxa Mason Mount iyadoo garsoore Taylor uu tilmaamay gool ku laad.
Mason Mount ayaa rigoorada u soo istaagay isagoo dhinac qaldan u diray goolhayaha islamarkaana Chelsea u dhaliyay goolka barbaraha.
Daqiiqadii 71aad Southampton ayaa ku dhawaatay inay hogaanka ciyaarta ku soo laabato markii kubad madax aheyd uu galay Vestergaard ay ku dhacday birta, kubada ku celiska uu helay Ings ayaa iyadana hareermartay goolka.
Tababare Tuchel ayaa labo bedel sameeyay daqiiqadii 76aad isagoo soo geliyay Jorginho iyo Hakim Ziyech kuwaasoo bedelay Kovacic iyo Hudson-Odoi oo isaguba bedel ku soo galay bilowgii qeybta labaad. Xiddiga reer England ayaa ahaa mid ka careysan bedelkiisa isagoo haraantiyay dhulka.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah oo ay ku kala baxeen labada kooxood.